Ukhala ngendlala uXhentsa | News24
Ukhala ngendlala uXhentsa
UXhentsakumisiwe uphethe icwecwe lakhe elitsha ‘Ndize NgokwamPHOTO:
Imvumi ka masikhandi esakhasayo uXhentsakumisiwe ikhala ezimantshiyane emva kokuba urhulumente ememelele ukuba abantu bayeke ukuhamba endleleni bahlale ezindlini, kuvalwe zonke iivenkile kuvulwe nje ezo zithengisa ukutya namayeza.
U-Xhentsakumisiwe, ogama lokwenene nguLandile Sokweba nohlala kwaLanga, uthe ukususela oko umongameli Cyril Ramaphosa wamemelela abantu bayeke uyabula esithubeni ngenzame zokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane ye Corona zange aphinde akwazi ukuyocula endleleni ukuzama ukuthengisa icwecwe lakhe elitsha nelibizwa Ndize Ngokwam.
Eli cwecwe, neli neengoma ezi 15, walikhuphe kunyaka ophelileyo kwinyanga kaCanzibe, kwaye licwecwe lakhe kodwa uthi belithengisa ngamandla.
“Siyabethakala thina zimvumi zisakhasayo, ingakumbi thina bantu bazithengiselayo umculo wethu ngoba ngoku asivumelekanga ukuba sicule endleleni nakwiindawo zezithuthi zika wonke-wonke, kanti lelona hlobo sithi sifumane ngalo imali. Ngoku kunzima ukuba abantu bafumane amacwecwe ethu,” uthethe watsho uXhentsakumisiwe.
Uhambise wathi xa ngaba behleli phantsi nomculo wabo uyalibaleka kuba uninzi lwabo bezimvumi zikamaskhanda ezisakhasayo umculo wabo awudlalwa koonomathotholo. “Siyasiva isikhalo sikarhulumente kwaye siyasihlonipha. Xa sikhala akukuba siyadelela okanye sidelela inkokheli zethu, koko kuzeke nathi sisifa liphango ngoba nathi luhlobo esiziphilisa ngalo olu lomculo,” ucacise watsho.
Waleke ngelithi umnqweno wakhe kukuba abantu bangathobela umthetho ka rhulumente ukuze zingandiswa ezintsuku, khona ukuze bazokwazi ukuphinda bahambe becula.
Njengayo nayiphi na imvumi esakhasayo uXhentsa kumisiwe ucula ezirenkini zezithuthi zikawonke-wonke, kudederhu lwevenkile, nasezisuseni xa ethe wamenywa.
“Akukho apho ndingaculi khona mna yonke nje indawo ndiyacula. Kwaye umculo wam ulungele naye nawuphi na umntu omdala nomncinci,” uthethe watsho.
Waleke ngelithi zonke ingoma zakhe wazibhalela ngokwakhe.
“Amaxesha amaninzi ndibhala ngezinto ezenzekayo ekuhlaleni nezikhe zenzeka kum. Ngelinye ixesha kuyenzeka ndithi ngoku ndihleliyo ndibenombono wento isenzeka kwaye ndide ndive nesandi sayo apha kum ezindlebeni,” ucacise watsho uXhentsakumisiwe. Le mvumi, nezalelwe eNgcobo, icwecwe layo sele lachongwa njengelona ligqwesileyo kumculo womaskandi kukhuphiswano laminyaka le elithi libanjwe kwiphondo lase Mpuma Koloni, i- annual Eastern Cape Music Awards ngesilungu.
Uthe icwecwe lakhe ulithengisa ngama R80 kwaye lifumaneka kuye. Uthe umntu olifunayo incwecwe lakhe angamtsalela umxeba ku 063 744 7923